3 Zvidzidzo kubva kune Chokwadi Vatengi-Centric Makambani | Martech Zone
Kuunganidza mhinduro dzemutengi idanho rekutanga riri pachena mukupa zvakanakisa zvevatengi zviitiko. Asi inongova nhanho yekutanga. Hapana chinoitwa kunze kwekunge iwo mhinduro inotyaira imwe mhando yechiito. Kazhinji kacho mhinduro inounganidzwa, yakaunganidzwa mudhatabhesi yemhinduro, yakaongororwa nekufamba kwenguva, mishumo inogadzirwa, uye pakupedzisira hurukuro inoitwa ichikurudzira shanduko.
Panguva iyoyo vatengi avo vakapa mhinduro vakaona kuti hapana chiri kuitwa neyakaiswa yavo uye vangangoenda kune mumwe mutengesi. Chokwadi vatengi-centric masangano vanoziva kuti vatengi vanhu uye havafarire kurapwa sechikamu cheyakaunganidzwa yakazara. Vatengi vanofanirwa kutariswa sevanhu vamwe, kwete nhamba. Kune mamwe makambani, ndicho chinhu chakakosha, sekuratidzwa neForbes 'yegore runyorwa rweiyo Akawanda Makasitoma-Centric Makambani. makambani.
Vatengi-centric makambani ari laser-anotarisana nevatengi vavo. Panzvimbo pekufambiswa nevanogovana kana mari, makambani aya anoisa vatengi pakati pechisarudzo chose chavanoita. Ivo vakatarisisa-vatengi pamusoro pechigadzirwa-chakatariswa. Iko centricity kunoonekwa mune rakakura basa uye yakabatana mutengi ruzivo.
Blake Morgan, Forbes Mukuru Anopa
Mukufunga izvo zvinoita kuti makambani aya abudirire pakuve mutengi-centric, mashoma maitiro anova akajeka. Kutarisa aya mapatani kunogona kubatsira mukubatsira mamwe makambani kuti asimbise hukama hwevatengi.
Chidzidzo 1: Wana Vashandi Pachikwata
Kambani yemari yemari USAA, inova # 2 pane Forbes 'runyorwa rwe2019, inokurudzira vashandi kuti vadzidze nezvevatengi kuti vakwanise kupa yakanakisa kuraira uye zvigadzirwa kurudziro. Inobhadharwa nekuti USAA's Net Promoter Score (NPS) kakapetwa kanokwana average average banking. USAA inobatsira vashandi kunzwisisa maitiro evatengi, maererano nechinyorwa Maitiro EUSA Anobheka Mutengi Chiitiko Chiitiko Kugadzira Mukambani Yayo Tsika. Rubatsiro urwu runosanganisira:
Kupa yekuwanika lab, uko vashandi vanogona kufunga kuti masevhisi angangoda kuchinjiswa sei kune vanhu vakaremara. Tora cheki kuongorora, semuenzaniso. Mune yekuwanika lab, vashandi veUSAA vakagadzira izwi-rakagonesa kure kure kutora tekinoroji kuitira kuti vanhu vane maziso asingaoni vanzwe zviri pane cheki sezvo foni yavo ichizviongorora.
Kudzidzisa vashandi panguva yekukwira pahupenyu hwemauto sezvo vatengi veUSAA vari nhengo dzechiuto nemhuri dzavo. Kudzidziswa uku kunosanganisira kugadzirira uye kudya maMREs (chikafu, kugadzirira-ku-kudya) uye kuchera kwechiedza neakarega basa sajeni. Tsamba yemushandi inopa zvinyorwa pahupenyu hwemauto.
Vashandi vanokwanisa zvakare kugovana mazano avo pamaitiro ekuvandudza ruzivo rwevatengi. Gore rega rega, vashandi vanoendesa angangoita zviuru gumi mazano; 10,000 yakatumira mazano akagamuchira patents dzeUS, zvinoenderana nechinyorwa cheUSAA tsika yevatengi. Munguva yeHurricane Harvey muna897, rutsigiro rwekambani rwevashandi utsva hwakakonzera kugadzirwa kwenzvimbo yepamhepo nemifananidzo yepamberi nepashure pemuchadenga kuitira kuti nhengo dzeUSAA dziwone kukuvara kwedzimba dzadzo vasati vazviona ivo pachavo.
Kugamuchira zvechokwadi vatengi-centricity, iyo CEO, vatungamiriri vakuru, uye timu yekushambadzira inofanirwa kubvumirana kutarisisa mukuvandudza ruzivo rwevatengi. Chief Marketing Officer nevamwe vatungamiriri vakuru vanogona kukurudzira vamwe musangano nekumisikidza vatengi kukosha sekugara uye kugadzira zvirongwa zvevashandi kuti vatsigire.
Uye zvakare, ini ndinokurudzira kusarudza mushandi anogona kuita semhare yekambani yemutengi. Munhu uyu haafanire kunge ari mukuru mukuru asi anofanira kunge ari munhu ane simba rekufurira vamwe nekuvabata kuti vazvidavirire. Uye ivo vanofanirwa kuve nechido chekuita semhare yevatengi centricity uye vakazvipira kutsigira kambani basa revatengi zvinangwa.
Chidzidzo 2: Ita Sevhisi Yevatengi Sevhisi
Muna 2019, Hilton akawana American Vatengi Kugutsikana Index (ACSI) mamakisi makumi masere, iyo yaive mamakisi epamusoro uye imwe yakagovaniswa neimwe chete hotera. Kunyange iri mamakisi anoyevedza, Hilton anosarudza kubata vatengi sevanhu kwete kuita sehuwandu hwehuwandu.
Mumwe muenzaniso weiyi iHilton Yakabatanidzwa Kamuri, iyo inoita kuti nhengo dzeHilton Honors dziratidze varaidzo yavo yavanofarira, kumisikidza zvavanofarira zveterevhizheni uye tembiricha yemukamuri, uye kudzora TV, mwenje, uye thermostat kuburikidza neapp yavanotora kurunhare rwavo, zvinoenderana nebhurocha riri paHilton Yakabatanidzwa Kamuri.
Vaenzi vane kudzora kwakafanana kwavanazvo kumba, uye kunoitisa kuti ive nesisitimu yakasangana. Izvi zvinotipa mukana wakakura pamusoro pevakwikwidzi vedu mumusika.
General Manager weCanopy naHilton
Kuitira vatengi basa kunoda kunzwisiswa kwakasimba kweumwe mutengi zvinodiwa uye zvinodiwa. Nzira yakanaka yekupinza mutengi mukufunga kwemazuva ese ndeyekutanga kushambadzira misangano nemutengi ari pamusoro pechirongwa. Vashandi vanogona kuita izvi na:
Kugovera zvavakadzidza kubva mukukurukurirana kuchangobva kuitika nemutengi
Kuva nemumwe munhu achitaura nekutengesa kana rutsigiro kugovana chimwe chinhu chitsva chavakadzidza nezve mutengi
Kukwereta nzira yeAmazon yekubvunza iyi mibvunzo nezve mazano matsva: Ndivanaani vatengi vanokanganiswa nepfungwa iyi? Sei zano iri richivafadza? Kuongorora metric nyowani kana yakagadziridzwa pane vatengi, senge NPS
Chidzidzo 3: Tora Chiito Pane Vatengi Mhinduro
rokushanda. haigadzirise hukama 'hwepakati', maererano neBlogday blog post Mutengi Kubudirira Zvinoreva Avhareji Hazvimbofi Zvakanaka Zvakakwana. Iyo kambani inokurudzira vatengi kubatsira kubatsira kugadzirwa kwechigadzirwa nekuve wekutanga kutora kana kuyedza kutsva kutsva vasati vawanikwa zvakanyanya.
Tinotenda vatengi vanogutsikana kana vachikwanisa kupa, uye isu tinoshanda zvakanyanya kana tichigona kuendesa maficha, zvigadziriso, uye kugona zvichienderana nemhinduro yako.
Chief Mutengi Mutengi Emily McEvilly
Nepo yazvino mhinduro yemutengi iri nyaya yakanaka yemisangano, iyoyo haifanire kunge iri nguva yekutanga mhinduro ichikurukurwa. Kurongeka chaiko ndekwe kutanga kupindura nyaya yevatengi nekuigovera kumushandi kuti agadzirise - mukati memaawa makumi maviri nemana kana zvichibvira - wozogovana mhinduro kune wese munhu ari musangano. Mhinduro yevatengi inofanirwa kuve yakajeka uye inosvikika. Nhau mbiri dzakanaka uye dzakaipa dzinofanirwa kugoverwa pachena.
Mushure mekugadzirisa nyaya iyi, unofanirwa kuongorora mhinduro kuti uone kuti yakauya sei uye nekukurukura kuti ungadzivirira sei nyaya dzakafanana kuti dzirege kuitika mune ramangwana. Izvi zvinoguma nekunzwisisa kwakapfuma kwevatengi vako uye kunounza kuvimba kwakanyanya kubva kune vatengi.
Tora Matanho Ekutenga Vatengi-Centricity
Kuve mutengi-centric sangano rinoda kutora munhu wese ari mubhodhi kubva kumusoro-pasi, kugadzira zvakasarudzika mutengi zviitiko, uye kuunganidza uye kupindura kune vatengi mhinduro. Tevedzera iwo muenzaniso wakasarudzika nemakambani anoona nezvevatengi uye rako rekushambadzira timu uye sangano rinoswedera padhuze kumutengi wako uye riwedzere mukana wekuwana nekuchengetedza akawanda acho.
Shanyira Alchemer Kuti Uwedzere Ruzivo
Tags: alchemerBlake Morganmutengi centricmhinduro yemutengiMabatiro evatengivatengi kuita sevanhumutengi-centricmushandi kudzidziswaForbesHiltonHilton yakabatana mukamurinet inosimudzira mamakinpsPersonalizationrokushanda